Madaxweynaha Somaliland Oo Qasriga Madaxtooyada Ku Qaabilay Wefdi Ka Socda Midawga Yurub | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweynaha Somaliland Oo Qasriga Madaxtooyada Ku Qaabilay Wefdi Ka Socda Midawga Yurub
images/stories/qayb wefdiga eu ka mid ah.jpg Hargeysa (ANN) Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud ( Siilaanyo) ayaa maanta qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Wefdi Balaadhan oo ka socda EU-da, weftigan oo uu hogaaminayey Mr. Geroges-Marc Andre oo ah wakiilka EU-da ee Somaliland / Somaliya. Wefdiga oo ka koobnaa 13 xubnood oo ka kala socda wadamada Sweden, Finland,
Denmark, France. Netherlands, Hungary, Spain, Germany, Austria iyo UK. Kulanka Madaxweynaha ee wefdiga waxa ku weheliyay Madaxweyne xigeenka Somaliland C/raxmaan Seylici iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada. Sida lagu sheegay war saxaafadeed kasoo baxay kulankaa ka dib qasriga madaxtooyada, wuxuu madaxweynuhu uga waramay xubnahaa xaalada xaalada guud ee dalka. warsaxaafadeedkaa oo uu ku saxeexn yahay Afhayeenka madaxtooyada C/llaahi Daahir Cukuse wuxuu isagoo dhamystiran u qornaa sidan;-
“Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud ( Siilaanyo) ayaa maanta qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Wefdi Balaadhan oo ka socda EU-da, weftigan oo uu hogaaminayey Mr. Georges-Marc Andre oo ah wakiilka EU-da ee Somaliland / Somaliya.
Wefdiga oo ka koobnaa 13 xubnood oo ka kala socda wadamada Sweden, Finland, Denmark, France. Netherlands, Hungary, Spain, Germany, Austria iyo UK.
Waxa uu madaxwaynuhu uga waramay Xaalada Guud ee Somaliland ee dhinacyada Nabadgelyada, Maamulka iyo Dhaqaalaha.
Waxa kale oo uu madaxwaynuhu Weftiga uga waramay Dhismaha Xukuumada oo uu sheegay in ay tahay Xukuumad aad u Tiro yar isla markaana Tayo leh oo ay Aqoonta iyo Khibradu Saldhi u yihiin, Madaxwaynuhu waxa uu tafaasiiska bixiyey siyaasada xukuumada Cusub ee Horu marinta Wadanka & in ay uu yoolkeedu yahay rumaynta iyo meel marinta Balanqaadyadii xiliga kaanbaynka ee hore.
Dhinaca kalena madaxwaynuhu waxa uu ku nuuxnuuxsaday Adkaynta Nabad gelyada iyo Ka hortaga Argagixisada iyo Budhcad badeeda.
Madaxa Weftiga Georges-Marc Andre ayaa isaguna waxa uu madaxwaynaha si wayn ugu hambalyeeyey doorashadii Dalka ka dhacday iyo Sidii nabad gelyada lahayd ee isbedelku u dhacay, Madaxa weftigu waxa uu soo maalilnad ku dhiiriyey Dadaalka ay ugu jirto inay Horu-mar ka gaadho Dhismaha Dawladnimada & Hanaanka Dumuquraadiyada, waxaanu sheegay in ay EU-du diyaar u tahay in ay Somaliland ka caawiso farsamada iyo Aqoonta lagu Xaqiijinayo taas”.